पूर्व साँसद नरेन्द्र साहद्वारा सामुदायिक विद्यालयलाई डस्टबिन बितरण – स्वर्णिम खबर
४ आश्विन २०७६, शनिबार ०९:२६
पूर्व साँसद नरेन्द्र साहद्वारा सामुदायिक विद्यालयलाई डस्टबिन बितरण
पुर्व साँसद एवं समाजसेवी नरेन्द्र साहले सर्लाहीको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ का सबै सामुदायिक विद्यलायलाई डस्टबिन बितरण गरेका छन् । पुर्व साँसद साहले फोहर व्यवस्थापन गर्नका लागि सामुदायिक विद्यालय र उच्च सामुदायिक विद्यालय गरि १ सय १७ विद्यालयलाई डस्टबिन बितरण गरिएको सहयोगी रोशन थापाले बताएको छ । सर्लाही क्षेत्र नं. ३ का ६ वटा स्थानिय तहका १ सय १७ विद्यालयमा २ सय ४६ थान डस्टबिन बितरण गरिएको छ ।
विधार्थी संख्या बढी रहेका विद्यालयमा ४ वटा र कम रहेका विद्यायलमा २ वटाको दरले डस्टबिन बितरण गरिएको हो । हरिवन बागमती, कविलासी , बरहथवा, बसबरिया र चक्रघट्टामा डस्टबिन बितरण गरिएको हो । कुहिन फोहर राख्नका लागि हरियो र कुहिएर नजाने फोहर राख्नका लागि रातो डस्टबिन प्रदान गरिएको हो । वातावरण संरक्षण हामी सबैको जिम्मेवारी भन्ने मूल उदेश्यका साथ डस्टबिन बितरण गरिएको हो ।
पहिलो चरणमा क्षेत्र ३ का विद्यालयहरुमा डस्टबिन बितरण गरिएको हो । यसैअघि पनि सभासद साहले शीत लहरको समयमा क्षेत्र नं. ३ मा विपन्न, दलित तथा गरिबहरुलाई कम्बल बितरण गरेका थिए । अब स्वास्थ्य चौकीहरुमा पनि डस्टबिन बितरण गरिने साहको सहयोगी रोशन थापाले जानकारी दिए ।